Ny vahoaka ihany no erany… | NewsMada
Ny vahoaka ihany no erany…
Par Taratra sur 25/04/2018
Betsaka ny fanontaniana mipetraka, manoloana ny toe-draharaha iainan’ny firenena, ankehitriny. Ny voalohany indrindra amin’izany, ny hoe tsy mba nahay naka lesona, tamin’izay efa nihatra tamin’ny teo aloha, ve ny mpitondra ankehitriny ? Navela hilatsaka ny rà, na azo nosorohina aza izany.
Raha tsy nijoro, mandà ny kolikoly sy ny tsy rariny ary, indrindra, ny tsy ara-dalàna ireo solombavambahoaka, ho tafita amin’ny tanjony ny mpitondra : ny fifikirana amin’ny seza hahafahana mangoron-karena. Etsy ankilany, vao mainka hihitsoka anaty lavaky ny fahantrana ny vahoaka.
Ankehitriny, feno ny kapoaka niaretan’ny Malagasy. Nanampy trotraka ny tsy fanajan’ny mpitondra ny fahalalahana haneho hevitra, izay novalina entona mandatsa-dranomaso sy bala namoizana ain’olona. Ny vahoaka hatrany no lasibatra sy iharan-doza amin’izany. Toy ny nandentika ny tenany ihany anefa ireo manam-pahefana, naniraka ireny mpitandro filaminana ireny.
Toy ny tsy misy iny hoe vinan’ny fisandratana iny. Mivoatra haingana ny toe-draharaha, satria ny fanovana ny mpitondra mihitsy no takin’ny eny an-kianja. Tsy vao izao no nitrangan’izany ary misy antony matoa miverimberin-dava. Tsy tokony hijanona hatreo amin’io fanovana olona io ny vahoaka ?
Ny fotoana toy izao no tokony hohararaotiny hitakiana ny fametrahana ireo fototra, heverina fa antoky ny tena fampandrosoana. Ao anatin’izany ny famerenana indray ireo soatoavina malagasy, toy ny firaisankina sy ny fihavanana, izay tsy tokony ho teny manidina fotsiny fa ho anisan’ny hiavaka ao anatin’ny lalàna fototra.
Eo koa ny fitakiana ny fanavaozana ireo lalàna samihafa, toy ny mahakasika ny fananan-tany, izay toa manome vahana ny vahiny ary nitera-doza ho an’ny Malagasy, tompon-tany. Mba tsy hijanona amin’ny fijerena tavan’olona fotsiny ny mpifidy fa handinika lalina ary handray andraikitra mivantana. Fa na inona na inona mitranga eto, ny vahoaka ihany no voa mafy, saingy izy ihany koa no erany.